Ny programa karatra fitsangatsanganana visa Elite any Thailand dia mbola mena aorian'ny 16 taona | Vaovao momba ny dia any Thailand
Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Karatra fitsangatsanganana visa Elite any Thailand
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny programa karatra fitsangatsanganana visa Elite any Thailand dia mbola mena aorian'ny 16 taona » Page 2
Fa ny tena fitomboana dia ireo sokajin-taona tanora kokoa izay mpifindrafindra nomerika na izay miasa ho injenieran'ny rindrambaiko, indrindra ny avy any Japon, Etazonia, ary Eropa. Na dia tsy manadino ny fepetra takiana fahazoan-dàlana hiasa aza ny fananana visa Elite, tsy mihatra ny fampiharana indrindra ho an'ireo matihanina izay tsy mipetraka any Thailandy fa mandeha matetika. Safidy iray hafa ny visa Smart 4 taona vaovao izay tsy mitaky fahazoan-dàlana misaraka nefa manana fepetra sarotra takiana avy amin'ny Board of Investment.
Na izany aza, nanaiky ny TPC fa ny fihanaky ny valanaretina coronavirus any Thailandy dia midika fa mihazona ny fihazonana elite maro. Tsy afaka mampiasa tsotra izao ny fidirana mandeha ho azy izy ireo satria ny mpandray anjara rehetra dia tsy maintsy mahazo taratasy fanamarinana fidirana avy amin'ny masoivoho Thai any amin'ny firenena fiaingana alohan'ny avela hiditra amin'ny fiaramanidina. Nisy ny fitarainana ny amin'ny fanemorana lava any amin'ny firenena sasany alohan'ny hanomezana alàlana ny masoivoho sy ny fahazoana ny tapakilan'ny sidina.
Ny fitakiana birao dia misy ny fitsapana mialoha ny fiaingany, fiantohana manokana COVID, ary quarantine tsy maintsy atao rehefa tonga any amin'ny hotely fisoratana anarana. Ireo mpangataka manana vaksiny vita dia voafatotra mandritra ny herinandro, ireo tsy misy mandritra ny 10 andro. Fanakantsakanana fanampiny ho an'ireo manana Elite dia taratasy iray avy amin'ny Quarantine Members Elite Thailand izay manamarina ny maha-mpikambana azy ao amin'ilay tetika. Ny fampisehoana ny karatra fotsiny dia tsy ampy.
Ireo masoivohon'ny TPC dia nilaza fa ny visa Elite dia voaporofo fa malaza amin'ireo vahiny manana voditongotra tsara izay mahatsapa fa io no safidy mora indrindra raha vao tafaverina ara-dalàna ny fomba fifindra-monina. Mandritra izany fotoana izany, ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand dia miara-miasa amin'ny TPC hanolotra bonus Elite bebe kokoa amin'ny ho avy. Anisan'izany ny mety ho fanombohana visa ho fe-potoana fohy kokoa noho ny 5 taona, toeram-piasana azo antoka hiasa ho an'ny mpifindrafindra monina, ary na dia trano maharitra ho an'ireo mpampiasa vola maharitra mividy fatorana maro na fananana mihaja aza.